Manao Fanamby Momba ny Hanohanana, Ny Ady Ary Ny Pôlitika Ireto Karazany 8 Toy Ny Ice Bucket · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2014 18:01 GMT
Ilay hetsi-panentanana miparitaka be ao anaty aterineto natao ho an'ny aretin'ny atidoha antsoina hoe sclérose latérale amyotrophique (ALS), dia natao mba hampahafantarana sy hamporisihana ny olona hanome fanampiana ho an'ny fikarohana. Maka lahatsary ny tenany eo am-panondrahana rano mangatsiaka be amin'ny lohany ireo mpandray anjara, ary avy eo manondro olona hafa mba hanao sahala amin'izany koa ao anatin'ny fe-potoana voafetra, raha tsy izany dia manome fanampiana hoan'ireo fikambanana mpanao asa soa.
Nomarihin'ny olana pôlitika i Afghanistan hatry ny 7 Jolay. Nanao fanamby tamin'ireo mpanao pôlitika tamin'ny alàlan'ny lahatsary mitovitovy amin'ny Ice Bucket Challenge ireo olom-pirenena vitsivitsy, mba ahitan'izy ireo marimaritra iraisana haingana ary hampandrosoana ny firenena. Manazava ilay hevitra ny maribolan'ny lahatsary ao amin'ny Facebook :
Ilay hetsi-panentanana “Lather Against Ebola” (Roatran-tsavony enti-manohitra ny Ebolà), dia manasa ny olona hanondraka ranon-tsavony ny lohany mba hampianarana ny vahoaka ny momba ny fifindran'ny otrikaretina Ebolà, izay nankarary olona mihoatra ny 3.000 ary namono olona mihoatra ny 1.500 tany Sierra Leone, Ginea, Liberià, Nizerià ary Senegal. Ny tenifototra ahafahana mahita ireo lahatsary ao anaty aterineto dia ny #MoussercontrerEbola. Ito misy lahatsarinà mpandray anjara iray, Edith Brou any Abidjan, Côte d'Ivoire:
Tsy mikasika ny resaka fahasalamana daholo ireo lahatsary rehetra. Any Gazà, karazanà Ice Bucket Challenge hafa ny Rubble Bucket Challenge (fanondrahana poti-bato amin'ny loha), izay natao hanaparitahana ny fanairana amin'ny fitalahoan'ireo ankizy mandritra ny fanafihana nataon'i Israely tany amin'ny tarika ka nahafatesan'olona. Anatin'izao lahatsary manaraka izao dia manazava ny mpandray anjara fa :
Indraindray, tsy ny rano ihany no zavatra tsy ampy any amin'ireo firenena sasany. Mba hamahana ny olana amin'ny filàna sakafo fototra any Nepal, nitatitra i Sanjib Chaudhary, mpanoratra ao amin'ny Global Voices, fa mahazo vahana ny fandraisana anjara amin'ny #FillTheBucket (fenoy ny gamela). Manazava izy fa:
59 minitra izayTiorkia